Ny Franche-Comté dia faritra frantsay iraisan'ny departementa efatra : ny Doubs, ny Jura, ny Haute-Saône ary ny Territoire de Belfort. Manam-belarantany 16 202 km2 io faritra io, telo isan-jaton'ny velarana tontalin'ny lafrantsa ny fivelaran'io faritra io. Besançon ny renivohi-paritr'i Franche-Comté.
Ny tanàna manan-danja ao amin'ny faritr'i Franche-Comté dia i Belfort, Besançon ary i Montbéliard (Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle). Ny tanàna hafa manan-danja koa dia Dole (renivohi-paritra taloha ny nahatongavan'i Louis XIV tamin'ny taonjato faha fito ambin'ny folo), Vesoul (renivohitr'i Haute-Saône), Arbois (renivohitry ny divay ny Jura), ary Lons-le-Saunier (renivohitr'i Jura).
Tsy nisy olona nipetraka teo amin'ny toerana misy an'i Franche-Comte ankehitriny mandritry ny taona Paleolitika, ny Gaulois no nipetraka teo tamin'ny taonjato faha dimy talohan'ny Jesoa Kritsy. Tsy dia voakitiky ny fifidra-monin'ny Jermanika firy ilay faritra tamin'ny faharesen'ny Romana, silaky ny tan'ny Alamana ny Franche-Comté tamin'ny taonjato faha dimy, ary tan'ny fanjakan'ny Borgôna izy tamin'ny 457 hatramin'ny 534. Lasa kristianina ity tamin'ny fianjadian'i Masina Columbanus, olona namorona monastera maromaro tany. Lasa silantan'ny fanjakana Franka ilay faritra tamin'ny 534. Lasa ao amin'ny fanjakana Merôvinjianinan'ny Borgôna izy tamin'ny 561, tamin'ny andron'i Guntram, zanaka faha telon'i Clothaire I. Tamin'ny 613, nampiray ny fanjakana Franka i Clothaire II.
Ny anarana Franche-Comté (fiteny malagasy : « Kaontia Afaka ») dia tsy dia miseho firy amin'ny lafiny ofisialy talohan'ny 1366, faritan'ny Kaontian'i Borgôna izy tamin'ny 888, tafiditra tao amin'ny fivondronan'ny Empire Jermanika Masina izy tamin'ny 1034.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Franche-Comté&oldid=893845"
Dernière modification le 15 Oktobra 2018, à 12:49
Voaova farany tamin'ny 15 Oktobra 2018 amin'ny 12:49 ity pejy ity.